Amiir Maxamud Yuusuf Ciise & Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan oo socdaal nabadeed ku tagay Gallaadi (Sawiro) – Radio Daljir
Amiir Maxamud Yuusuf Ciise & Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan oo socdaal nabadeed ku tagay Gallaadi (Sawiro)
Oktoobar 26, 2020 6:57 g 0
Wafdi ay hogaaminayaan Amiir Maxamud Yuusuf Ciise iyo Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan ayaa wacyigelin dhanka Nabadgelyada iyo Horumarka ku tagay Deegaanka hoos taga Degmada Gallaadi ee Gobolka Doollo.
Wafdiga ayaa si wayn waxaa loogu soo dhaweeyey guud ahaan deegaanada ay booqdeen iyagoo ka bilaabay Booqashada Dugsiga Hoose Dhexe ee Cigaal Caymo Halkaas oo Suldaan Cabdiqani ugu mahadceliyey Jaaliyadii Dhistay Dugsigaas oo loo baahnaa.
Deegaanka Baxdo ayaa wafdigu kula shireen odoyaasha ceelkaas waxayna si wadajir ah ugu gacan taageen inay adkaynayaan Nabadgelyada una jeedsan doonaan dhanka Horumarka.
Shacab aad u tiro badan ayaa kaga hor yimid wafdiga Deegaanka Dhudub iyagoo soo dhawayn wayn muujiyey kadibna Shir la qaatay wafdigii bulshada qaybaheeda kala duwan.
Suldaan Cabdiqani iyo Amiir Maxamud ayaa shacabka ku nool deegaankaas ku booriyey inay noqdaan walaalo ilaaliya nabadgelyada lana shaqeeya dawladda isla markaana ka hortaga falalka xun xun ee dhibka ku ah deegaanka.
Guud ahaan waxaa goob kasta oo wafdigu soo mareen laga dareemayey barwaaqada iyo xasiloonida ka jirta iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii.
Qaybaha kala duwan ee Shacabka ku nool Gobolka Doollo ee DDS ayaa uga mahadnaqay Amiir Maxamud Yusuf Ciise iyo Suldaan Cabdiqani Suldaan Xasan siday uga go’an tahay nabadgelyada iyo horumarka Deegaanka iyo Bulshadaba.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 233 Wararka 22233